नेपाली साध्वी हेमानन्द गिरीले केही महिना अघि भारतको उत्तराखण्डस्थित जोशीमठको शंकराचार्य बन्नका लागि आवेदन दिनुभयो । त्यस लगत्तै गिरी विश्वकै पहिलो महिला शंकराचार्य बन्न लागेको भन्दै चर्चा सुरू भयो । यो विषय अझै सेलाएको छैन् । अहिले गिरी शंकराचार्य बन्नु हुँदैन भन्ने एक खेमा छ, अर्कोले उनको समर्थन गरिराखेको अवस्था छ । यस आलेखमा उहाँ शंकाराचार्य बन्नु ठिक÷वेठिक भन्दा पनि नेपाली परम्परा शंकराचार्य हो कि होइन भन्ने मुख्य सवाल हो । वास्तवमा हामीलाई शंकराचार्य परम्परा आवश्यक छैन् । नेपालको सन्यासी परम्परा गोरखनाथबाट सिञ्चित रहेको छ । आलेख यसै विषयमाथि केन्द्रित छ ।
भारतमा चार मठका चार शंकराचार्य छ्न् । चार वेदका चार मठ चार दिशामा चार महावाक्यका आधारमा आध्य शंकराचार्यद्वारा स्थापित गरिएका हुन् । नेपालमा कुनै मठ आध्य शंकराचार्यद्वारा स्थापित छैनन् । शंकराचार्य परम्परा आठौं शताब्दी (सन् ७८८) को हो । पशुपतिनाथलाई दोस्रो शताब्दीको मानिन्छ, राजा शिवदेवको पालाको । मानदेवको चाँगुनारायणको अभिलेख नै संवत् ३८६ को हो । पशुपतिनाथ सनातनी मन्दिर हो न कि बुझिए जस्तो शैव । शैव, बौद्ध, तन्त्र, पाशुपत र वैदिक पम्परा प्रत्यक्ष जोडिन्छ पशुपति ।
नेपालमा नागाहरूको अखडा छैन कतै पनि । शिवरात्री बाहेक नागाहरूलाई नेपाल आउन प्रतिवन्ध नै छ । उनीहरु नेपाल आएको र नेपालबाट गएको अभिलेख राख्ने गरिन्छ । अनि, नागा महामण्डलेश्वर कसरी शंकराचार्य हुने, त्यो पनि पशुपतिनाथको ? नेपालको मन्दिर, शक्तिपिठहरू, गुरुकुल र गुम्वाहरू राज्यको प्रत्यक्ष सहयोगमा सञ्चालित हुन्थे इतिहास हेर्दा, अर्थात् मठाधिशको परंपरा नै नेपाली होइन ।
अखिल भारतीय विद्वत परिषद्, वल्र्ड हिन्दु फेडरेसन आदि संस्थाहरू नेपालमा शंकराचार्य घोषणा गर्ने अधिकार बोकेका संस्था होईनन् । शंकराचार्य कसैले घोषणा गरेर प्राप्त हुने पद होईन । शंकराचार्य छनौटको उत्तराधिकारी परम्परा छ । वर्तमान शंकराचार्यका योग्य उत्तराधिकारी नै अर्को शंकराचार्य हुने हो । हेमानन्द गिरी कुन शंकराचार्यकि उत्तराधिकारी हुन् ?
काशी विद्वत परिषद् पनि शंकराचार्य घोषणा गर्ने निकाय होइन । इलाहवाद उच्चअदालतले विवाद भएको खण्डमा मात्र अन्य शंकराचार्यको सहमतिमा राय दिनसक्ने भनेको छ । फेरि इलाहवाद अदालतको आदेश नेपालको लागि होइन । उसको निर्णय र उसको आदेश भारत देशको सरहदभित्र मात्रै मान्य हुन्छ; लागु हुन्छ ।
शंकराचार्यको योग्यता आध्य शंकराचार्यद्वारा प्रवर्द्धित मठाम्नायले गर्छ । दण्डिस्वामी हुनुपर्ने, वेदवेदाङ्ग र शांकर दर्शनमा पारङ्गत हुनुपर्ने, अखण्ड ब्रह्मचारीर ब्रह्मचारिणी हुनुपर्ने, योग्य उत्तराधिकारी हुनुपर्ने भन्ने छ । के हेमानन्द गिरी यी सबै विषयमा योग्य हुनुहुन्छ ? के उहाँ नियमको यस दायराभित्र अटाउनुभएको छ ?
महिला हुन् त्यसैले हुन्न, विवाहिता हुन्, छोडपत्र गरेकी हुन्, राजनीति गर्थिन् त्यसैले हुन्न भन्ने तर्क भने उपयुक्त देखिँदैन । विवाह या महिलाको विषय गृहस्थाश्रमको हो, सन्यासाश्रमको होइन । महामण्डलेश्वर हुन योग्य व्यक्ति शंकराचार्य पदको लागि अयोग्य छ भन्न मिल्दैन । अतः हेमानन्द गिरीको दावेदारी स्थापित चार मठकै लागि हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली भएको कारण नेपालमा मठ स्थापना गर्छ भन्नु चाहिँ अशास्त्रीय र नेपाली मौलिक धर्म संस्कृति विरुध्द छ ।
हेमानन्द गिरीले आफुले दण्ड धारण गरेको र जलमा प्रवाह गरेको बताउनु भएको छ । त्यसो हो भने उहाँलाई दण्डी स्वामीलाई दिईने हंश, परमहंश या सरस्वती आदि पद किन दिईएन ? किन उहाँ गिरी नै रहनुभयो ? उहाँले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आप्mनो व्रतवन्धादि संस्कार भएको कुरा बताउनुभएको थियो । तर, नेपालमा महिलाको व्रतवन्ध गर्ने प्रचलन नै छैन । १६ वर्षको उमेरपछि व्रात्य भईने र व्रात्यको व्रतबन्ध हुन नसक्ने शास्त्रीय मान्यता छ । त्यसैगरी, उहाँले एउटा अर्काे अन्तर्वार्तामा आफु नेपालमा काम गर्न आएको; मठ स्थापना गरेर बस्न नआएको बताउनु भएको थियो । त्यसो भए जोशीमठकै शंकराचार्य बनेर नै नेपालमा काम गर्न आउनुभएको भए यत्रो विवाद हुने थिएन र नेपाली महिला आधिकारिक शंकराचार्य भएकोमा नेपाली पनि गौरवान्वित हुने थिए ।
हेमानन्दले बुभ्न नसकेको तथ्य ?
तपाईं शंकराचार्य भएपछि हजारौँ नागाहरू नेपालमा रहनेगरी आउन सक्छन् । जैन परम्पराका श्वेताम्बर (सेतो वस्त्र मात्रै पहिरने) स्वामीहरू नेपाल आउँछन् तर त्यही परम्पराका दिगम्बर (वस्त्र नै नपहिरी नाङ्गै रहने) स्वामीहरु नेपाल आउँदैनन् । जैनहरूबाट समेत पालित नेपाली मुल्यमान्यता तपाईंबाट तोडियो भने यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला ?
शंकराचार्यको कार्य भनेकै अवैदिक मतहरूको खण्डन र शुद्ध वैदिक मतको स्थापना हो । पशुपती मठको शंकराचार्य हुनुभयो भने पशुपतिनाथलाई बौद्ध परंपराबाट हटाउनु तपाइको दायित्व हुन आउँछ किनभने शंकराचार्यले बौध्द मतलाई अवैदिक ठह¥याउनु भएको थियो । उहाँले सबैभन्दा बढी बौद्धहरूलाई वैदिक बनाउनुभएको थियो । तपाईं मिलेर बसेका सनातनी बौद्धलाई पशुपतिमा निषेध गर्नुहुन्छ या चुप लागेर शंकराचार्यको गरिमालाई लत्याउनु हुन्छ ? शंकाराचार्य अन्तिम निर्णयकर्ता पनि हो शास्त्रार्थमा । शास्त्रार्थको अवस्थामा अहिले भैरहेको संस्कार, भाषा, व्याकरण, लिपि, संवत्, तेस्रोलिङ्गी विवाह, कुमारी आमा शिरडीबाबालाई भगवान मान्ने / नमान्ने आदि विवादमा तपाईं के राय दिनुहुन्छ ? या मौन रहनुहुन्छ ?
विक्रमपूर्व पाँचौ शताब्दी हो बुद्धको समय । बुद्ध अघिको समय हो महाबीरको । जैन साहित्यले भन्यो, तीर्थङ्कर चौबीस छन् । महावीर चौबीसौँ तीर्थङ्कर हुन्, अन्तिम अर्थात् अब थप तीर्थङ्करको सम्भावना छैन । बुद्ध कालमा तीर्थङ्कर पदले ठूलो अर्थ र गरिमा राख्थ्यो, अर्हतले महत्व राख्थ्यो । न बुद्धले आफुलाई पच्चिसौँ तीर्थङ्कर बनाए । न अर्हत् नै घोषणा गराउन जवर्जस्ती गरे । बुद्ध बनेरै उनी महान भए।
क्राइष्टको परिकल्पनामा या बाइबलमा चर्च थिएन । त्यसैले बाइबलको नभएर चर्चको उत्पादन हो पोप, इसाइ सर्वोच्च धर्माधिकारी । त्यसैले पोपको हेडक्वार्टर जेरुसेलम नभएर भ्याटिकन भयो । युरोपमा चर्च र राज्यसत्ताको संघर्षले सोह्रौँ शताब्दीमा नयाँ पन्थ जन्मियो प्रोटेस्टेन्ट । बेलायतले इङ्लिकन चर्च बनायो तर हामी आफ्नै पोप बनाउँ भनेन। पोप एक भएकाले देशै पिच्छे पोप थपिएन ।
आद्य शंकराचार्यको समय सातौँ शताब्दी (डा.राधाकृष्णन्) आठौं शताब्दी (म्याक्स मुलर) मानिन्छ । उनले बुद्धको भिक्षुसंघकै शैलीमा नागा र सन्यासीहरूलाई संगठित गरी मठ स्थापना गरे । आलोचकले प्रच्छन्न बुद्ध भने पनि बुद्ध पछिको खाली पद मैत्रेय बुद्द बनेनन् । एघारौँ शताब्दीका हुन (सं १०१७०) रामानुजाचार्य । उनको समयमा मठ परम्पराको ठूलो महत्व थियो । अद्वैत मतको खण्डन गरी जगतगुरु भए पनि मठको परिकल्पना गरेनन् । सर्वोच्च प्रतिष्ठापुर्ण पद छ भने लिनुपर्छ भन्ने उनमा देखिएन ।
अब विषयमा फर्कौँ । आज पर्यन्त चार शंकराचार्य मठमा चार वेदलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चार उत्तराधिकारी हुन्छन् जसलाई शंकराचार्य नै भनिन्छ । आजको नक्सामा ती चारै मठ भारतमा पर्छन् । मठाम्नायले पाँचौ मठको परिकल्पना गरेको छैन, न त पाँचौ आचार्य । समयको आवश्यकता हो भने विषयलाई यति हल्का र महत्वहिन नबनाउँ । सन्त समाजको सम्मती र राय लिउँ । नेपालको आवस्यकता हो भने अन्य प्रतिष्ठापूर्ण पदको बारेमा सोच्न सकिन्छ । द्वारे, डिठ्ठा र मुखिया खलकको त आजसम्म समाजमा कत्रो इज्जत छ । श्री १०८,श्री १००८, मठाधिश हुँदै महामण्डलेश्वर बन्नुपर्छ भने पक्कै प्रतिष्ठित पद हो भन्ने मान्नुपर्छ । अर्थात् नेपालमा काम गर्ने मनसाय भए वर्तमान पदको गरिमाले रोक्ने देखिन्न ।
कसैलाई कवि बनाउन सकिन्छ, महाकवी बनाउन सकिन्छ, कवि शिरोमणि पनि बनाउन सकिन्छ, विश्वकवि पनि बनाउन सकिएला तर कुलपति बन्न त प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाइयो नि अर्थात खोइ पीठ पशुपतिमा ? शंकराचार्य हुने शंकराचार्यको पीठ नहुने पनि हुन्छ ? शंकराचार्य विभुषण होइन भन्ने बुझ्नुपर्दैन ?
न तीर्थङ्कर, न बुद्ध, न पोप, न शंकराचार्य या रामानुजाचार्य । नयाँ बनेर जानुपर्छ भन्ने हो , आगे आफ्नै मर्जी ।
प्रकाशित ५ भाद्र २0७५ , मङ्गलबार | 2018-08-21 07:33:34